कसरी गर्ने डेंगु नियन्त्रण? सरकार र नागरिकको भूमिका के? ::
डा यदुचन्द्र घिमिरे
लेखक : डा यदुचन्द्र घिमिरे
डेंगुको बारेमा पहिलो पटक सन् १७८० मा वर्णन भएको पाइन्छ। यो रोग दोस्रो विश्वयुद्घको समयदेखि विश्वमा समस्याका रुपमा आएको हो। सन् १९५० मा फिलिपिन्स र थाइल्यान्डमा यसको माहामारी भएको थियो। यसको भाइरस सविन भन्ने व्यक्तिले १९४४ मा पत्ता लगाएका हुन्। हाल विश्वभरि अर्थोपोडाबाट सर्ने रोगहरुमा डेंगु भाइरसको संक्रमण सबैभन्दा बढी देखिन्छ।
डेंगु कसरी सर्छ ?
हालै किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले, हेटौंडामा गरेको अध्यायनमा ६२.८ प्रतिशत पानी जम्मा हुने भाँडामा एडिस जातका लामखुट्टेका लार्भा तथा प्यूपा पाइएको थियो। पानी जम्मा भएका जम्मा १४ प्रकारका भाँडाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी (२० प्रतिशत) प्लास्टिकका ड्रममा एडिस जातका लामखुट्टेका लार्भा तथा प्यूपा पाइएको थियो। त्यस्तै १४.६ प्रतिशत अटोमोबाइल टायरहरु, ६.८ प्रतिशत प्लाष्टिक तथा मेटलका बाटा÷मग, ३.४ प्रतिशत सादा प्लास्टिक/मेटलका भाँडा, ३.१ प्रतिशत प्लास्टिक कप, २.६ प्रतिशत मेटलका ड्रम, २ प्रतिशत प्लास्टिक/ग्लासका बोतल,२ प्रतिशत प्लास्टिक/मेटलका कप, १.२ प्लास्टिक÷फ्रिजका भाँडा, १.२ प्रतिशत फूलदानी र ३.३ प्रतिशत अन्य पानी जम्मा हुने भाँडाहरुमा सो लामखुट्टेका लार्भा तथा प्यूपा पाइयो।
-(डा घिमिरे किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हेटौंडाका निर्देशक हुन्)
स्वास्थ्य खवर पत्रिका बाट ।